सरकारले गर्याे सचिवहरुको सरुवा ? | Express Samachar.com
सरकारले गर्याे सचिवहरुको सरुवा ?
८ फाल्गुन २०७५, बुधबार ११:२० July 8, 2019 Abinash Thapa	0 Comments नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सचिवको सरुवा
सरकारले गर्याे सचिवहरुको सरुवा :- सरकारले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा विवादमा मुछिएका कृष्णप्रसाद देवकोटासहित ६ जना सचिवको सरुवा गरेको छ । एक जना सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरी पदस्थापन गरिएको छ ।
सचिव देवकोटालाई पर्यटन मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । देवकोटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा मुछिएका थिए । पर्यटन मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई ल्याइएको छ । यसैगरी गजेन्द्र ठाकुरलाई खानेपानी मन्त्रालयबाट नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरसँग मत बाझिएपछि उनलाई सरुवा गरिएको हो । ठाकुरले मन्त्री मगरले आफूलाई अनियमित रुपमा काम गर्न दबाव दिएको र आफूले अस्वीकार गर्दा सरुवा गरिएको बताउँदै आएका छन् ।
ठाकुरलाई नेपाल ट्रष्टमा पठाएर मन्त्रालयमा दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई ल्याइएको छ । शर्मा यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थिए । नेपाल ट्रष्टमा सचिव पद रिक्त थियो । यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का सचिव रेश्मीराज पाण्डेलाई रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । रक्षा मन्त्रालयका विष्णुप्रसाद लम्साललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएको छ ।
यस्तै सहसचिव सूर्य गौतमलाई सचिवमा बढुवा गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको छ ।
here is the post on बरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले दिए राजिनामा
← Selecting Effective Secrets Of Bright Brides Site
सुनको भाउ अहिलेसम्मकै महंगो →
१० चैत्र २०७५, आईतवार ०९:१५ Abinash Thapa 0
११ फाल्गुन २०७५, शनिबार २०:२२ Abinash Thapa 0
२४ श्रावण २०७६, शुक्रबार ०९:३२ Abinash Thapa 0